Xog Ogaal oo ku Saabsan Mustaqbalka Email-ka Software-ka iyo Adeegyada Suuqgeynta
Khamiista, Diseembar 1, 2011 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Scott Hardigree
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ku noolaanshaha iyo neefsashada warshadaha niche, sida ku shaqeynta an wakaalada emailka, ayaa ah inay qofka siinayso fursad uu kaga fikiro waxa mustaqbalka dhici kara.
Waxyaabaha soo socdaa waa aragti-mustaqbal ah oo ku saabsan sida suuq-geynta e-maylku u ekaan doono sanadka 2017 ee loogu talagalay xirfadleyda, suuqleyda iyo macaamiisha si isku mid ah.
Magaca Ciyaarta ayaa isbadalay
Si dhakhso leh oo lix sano ah iyo ereyga "suuqgeynta emailka" ayaa laga waayey gabi ahaanba afkeenii. In kasta oo uu ka hooseeyo 2011, suuqgeynta emaylka weli waxay soo saartaa ROI aad u tiro badan; hase yeeshe waa hal gaari oo suuq dhijitaal ah.
Mustaqbalkan, isdhexgalka bulshada, moobilka, goobta ku saleysan iyo suuqgeynta ku saleysan guriga waa mid aan dhib lahayn. Kanaallada farriinta shaqsiyeed kuma xirna.
Waxaa jira waxyaabo yar yar oo ku saabsan gudbinta farriimaha wax ku oolka ah iyada oo loo marayo mid kasta oo ka mid ah kanaalada suuqgeynta, laakiin kala duwanaanshahaas waxaa inta badan wada dookhyada macaamiisha si wanaagsan loo diiwaangeliyey ee aan ahayn habka gudbinta lafteeda. Hawsha aasaasiga ah ee adeegsiga kanaalkan isku dhafan waxay la mid tahay sidii ay ku soo noqotay sanadkii 2011: qaybinta farriimaha khuseeya iyo waqtiga ku habboon. Si kale haddii loo dhigo, ujeedku wuxuu ahaa, weligiina ahaa, in la dhigo dalab sax ah, qofka saxda ah hortiisa, waqtiga saxda ah.
Sababtoo ah ereyada iimaylka suuq-geynta, suuq-geynta bulshada iyo suuq-geynta moobiilku waxay ahaayeen kuwo aad u xaddidan oo si sii kordheysa u weeraraya macaamil suuq-daalan, waa inay tagaan. Ku soo dhowow da'da Fariinta Dijital ah.
Isbedelada ugu waaweyn ee fariimaha casriga ee casriga ah ma aheyn sida loo gudbiyay; waxay ahayd kobcinta iyo xoojinta tiknoolajiyada, baahida loo qabo shaqaale xirfad leh, iyo aragtida iyo awood siinta macaamiisha.
Shiftku wuxuu ahaa mid deg deg ah oo xaaqid ah
Sanadkan 2017, Bixiyeyaasha Fariimaha Dijital ah (DMPs) waxay si fudud ugu qaybin karaan farriimaha suuq geynta shaqsiyadeed qalabka, waqtiga iyo booska. Hadda waxay kakooban yihiin waqtiga-dhabta ah, is-gaarsiinta la-qabsiga ah ee si dhib la’aan ah ugu qulqulaya kanaallada cusub, sida TV-yada la falgala, iyo kuwii hore, sida barta iibka. Laakiin deeqaha DMP kuma koobna oo keliya faafinta iyo raadinta farriimaha suuqgeynta dijitaalka ah. Waxay ku sameeyeen horumar la yaab leh falanqaynta xogta iyo otomaatiga suuq geynta.
Warbixinta iyo soosaarka ololuhu sidoo kale waa mid caqli-gal ah oo wax-ku-ool ah, waxay ka gudubtay meel ka baxsan furitaan iyo dhagsi iyo tifaftireyaasha WYSIWYG. Ka fikir fikirka tooska ah, tijaabinta noocyada kala duwan iyo wax isdaba marinta, isku duwida maadooyinka kala duwan ee firfircoon, gudbinta jawaabta, iyo wareegga xiran, xisaabinta iskutallaabta kanaalka ee ROI ee 10th awooda
DMPs waxay kaloo bixiyaan habab adag oo xog aruurin ah. Xogtan hodanka ahi waxay ka shubaneysaa is dhexgal kasta; laga bilaabo macaamiisha fudud ee aaladda moobaylka illaa xogta habdhaqanka ee laga soo ururiyo barta macaamiisha lagala baxo.
Laakiin sidee ayay deeqaha DMP si dhakhso leh ugu soo baxeen? Ku noqo 2012, ka Email Bixiyeyaasha Adeegga (ESPs) waa la isku dayay, qaabka Google, si loogu ilaaliyo suuqleyda dhexdooda iyo kaliya is dhexgalka. Tartan tikniyoolajiyadeed iyo sirdoon ayaa dhacay.
Qiimaha Qiimaha Hoose iyo Awooda Cusub
Muxuu dagaalkan farriinta dijitaalka ahi ugu talagay suuqleyda maalin kasta waxay ahayd in kharashka adeegyada farriimaha dijitaalka ah ay bilaabeen inay si aad ah hoos ugu dhacaan qalabkuna wuxuu bilaabay inuu si dhakhso leh u horumaro. Tani waxay si cad u ahayd war soo dhaweyn u leh suuqleyda laakiin sidoo kale kan Bixiyeyaasha Fariinta Dijitaalka ah, sababta oo ah xoojinta xoojinta iyo soo iibsiga ayaa dhacay taas oo waligeed wax ka beddeleysa warshadaha.
Ujeedo ah in lagu daro waxkasta oo suuqleydu dalbadeen, Bixiyeyaasha Fariimaha Dijital ah waxay bilaabeen inay helaan shirkadaha kormeerka warbaahinta iyo xog uruurinta xogta. Waxay shaqaaleeyeen maskax-yaqaanno falanqeeyayaal iyo khuburo UI ah. Waxay u fureen dalabyadooda illaa adduunka waxayna ka jareen qoraallo cusub rubuc kasta. Waxay ahaayeen dab.
DMP-yada yar-yar iyo kuwa dhexe ayaa la socon kari waayey xawaaraha kacsan iyo dakhliga oo yaraaday. Waa la burburiyey ama waa la liqay. Bixiyeyaasha niche ayaa dib loogu celiyey kuwo dheeri ah. Meel suuq ah oo mar ay buux dhaafiyeen boqolaal tartameyaal ah, hadda kaliya in yar oo ka mid ah beetsoths-ka adduunka ayaa haray.
DMP-yada casriga ahi waxay soosaaraan dakhli aad ugayar-macaamilkiiba sidii ay awal sameeyeen. Si kastaba ha noqotee, cabirkoodu waa mid aad u ballaaran oo, haddii aysan ahayn kuwa u ololeeya iyo tilmaamaha adag ee is-xakamaynta, ka-hortagga aaminaadda iyo u-doodayaasha asturnaanta waxay bilaabi doonaan inay dano aan caafimaad qabin ka yeeshaan dhaqdhaqaaqyadooda.
Waxay heleen dakhli cusub sidoo kale, kan ugu sarreeya oo laga sameeyay shati siinta xogta macaamiisha ay keydiyaan. Sirdoonkan waxaa loo fidiyaa, laguna beddelaa, shirkadaha cilmi baarista iyo kanaalada suuq geynta tartanka sida raadinta lacag bixinta, boostada tooska ah, iyo xayeysiinta muujinta dhijitaalka ah.
Sare u kaca Xirfadaha iyo Farsamo yaqaanada
Qalabka dhameystiran, oo ay bixiyaan Bixiyeyaasha Fariimaha Dijitaalka ah ee 2017, hadda waa la gaari karaa ku dhowaad suuq kasta. Si kastaba ha noqotee barnaamijyada farriinta dijitaalka ah ayaa aad uga casrisan. Shaqaalaha xirfadda leh ayaa ah kuwa kala geddisan ee u dhexeeya barnaamijyada dhaliya liita, dhexdhexaad iyo ROI gaar ah oo ka socda Fariinta Dijitaalka ah, laakiin sida taariikhdu noo sheegayso dhammaan khubarada ma sameyn doonaan jarista.
Sababtoo ah warbixintu waa mid adag oo waxqabad leh, suuqleyda uma baahna guryo ama xisaabyahanno suuq geyn ah oo dibadda ah si ay u falanqeeyaan xogta una sameeyaan talooyin. Si kastaba ha noqotee xogtan waa in hadda la adeegsadaa oo barnaamijyada waa in la hagaajiyaa. Dhagxaanta dhagxaanta ee warshadaha Fariinta Dijitaalka ah waxay hadda u kala dhacaan laba xero, farsamo yaqaanno iyo farsamo yaqaanno.
Xirfadlayaashu waa kuwa abuura qorshooyinka oo fuliya; ha noqdaan mufakiriin, maamuleyaal, ama hal abuur. Farsamayaqaannadu waa kuwa soo ogaada dhibaatooyinka, kuwaas oo ka bilaabma xawaare ku-soo-gaadhsiineed oo la gaadhsiiyo illaa is-dhexgalka is-dhexgalka, isla markaana saxo.
Akhlaaqda Macaamiisha iyo Aragtida
Macaamilku wuxuu hadda si fiican uga warqabaa farriimaha badan ee suuq geynta ah, ee haddana ku habboon ee ku wareegsan hareerahooda. Tani waxay ku qasabtay suuqleyda inay beddelaan, wixii mar ahaan jiray, dalabyo hal dhinac ah oo loo maro wada hadallada macaamiisha diirada saaraya. Wadahadalladani waxay ku dhacaan labada heer mid-ilaa-hal iyo dad badan oo dalxiis ah. Waxay isbeddelaan waqti ka dib markii tirada iyo dabeecadaha macaamilka ay is beddelaan oo ay u beddelaan caadooyinka dhaqanka.
Xogta uu bixiyo macmiilku, lagana soo saaray dhaqankooda, hadda waa mid aan xad lahayn. Suuqleydu waxay u egtahay aragti aan xadidnayn maskaxda qofka iyo waliba moodooyinka saadaalinta ee fasaladooda tirakoobka. Suuqgeyntu waxay u isticmaashaa macluumaadkan si ay u bixiso waxa macmiilku u badan yahay inuu iibsado hadda, iyo mustaqbalka, iyo sidoo kale saadaalinta qiimaha noloshooda ka dibna loo qoondeeyo ilaha ku habboon.
Sababtoo ah macaamilku wuxuu aad ugu feejigan yahay suuqgeynta akhlaaqda wuxuuna ka walaacsan yahay in dhaqanku ugu dambeyntii noqdo mid aad u kacsan; keyd ogolaansho caalami ah oo gaar loo leeyahay ayaa dhowaan la aasaasay, oo si fudud loogu yeeray Xulasho.
Xulashada waa iskaashi, maareyn xogta dhexe iyo xarun doorbid oo labadaba ah mid aad u ammaan badan isla markaana awood u leh. Waxay u suurtogelin doontaa macaamilka fursad uu ku xakameeyo, sida saxda ah, nooca xogta laga soo ururiyay, ugana faa'iideysan karo suuqleyda iyo farriimaha ay aqbali doonaan, cidda, iyo sidoo kale sida iyo goorta la keenayo.
Tani waa adeeg bilaash ah macaamilka laakiin Bixiyeyaasha Fariimaha Dijital ah waa inay ruqsad siiyaan macluumaadkan, kaas oo hubin doona inay la kulmaan rajooyinka macaamiisha ayna u hoggaansamaan Sharciga Ilaalinta Asturnaanta Dijital ah ee 2015.
Dib u noqoshada Doorka
Sannadkii 2017, warshadaha farriinta dijitaalka ah dhammaantood way is rogeen. Maalmihii ugu horreeyay ee suuqgeynta iimaylka, qaybta libaax ee kharashka, waqtiga iyo dareenka ayaa loo aaday barnaamijka suuqgeynta iimaylka. Laakiin hadda maadaama adeegyada DMP-yada dib loo cusbooneysiiyay, qiimaha dhabta ah ee Fariinta Dijitaalka ah waxay ku tiirsan tahay oo keliya kartida ku duuban qalabkaas.
Dib u soo celinta doorkan ayaa sidoo kale ka muuqata xiriirka ka dhexeeya suuqleyda iyo macaamilka. Suuqleyda ayaa hadda aad ugu nugul baahida iyo rabitaanka macaamiishooda iyo rajadooda. Haddii ay tahay inay sii wadaan wadahadalka sanadaha soo socda, waa inay ahaadaan. Iyo beddelkooda xogtooda shaqsiyadeed ee qotada dheer, macaamilku wuxuu helayaa qiimo-jaban, qiimo-sare iyo waayo-aragnimo lagu xakameynayo asturnaantooda sidii hore.
Tags: isticmaalka dadkabixiyaha farriinta dijitaalka ahsharciga ilaalinta asturnaanta dijitaalka ahdmpEmail Marketingadeeg bixiyaha adeegga emaylkaIstaraatijiyadda emaylkagaar ahaanqiimaha nolosha
Jeebka Dijital ah iyo Mustaqbalka Bixinta
2, 2011 at 4: 46 AM
Waxaan u maleynayaa 10 sano gudahood suuqgeynta iimaylka in muddo la waayi lahaa oo farriimaha ay macaamiisha ku gaari doonaan si kala duwan
5, 2011 at 10: 07 AM
Hi Vaidas - Xaqiiqdii waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko waxa mustaqbalka dhici doona, gaar ahaan sida ay u ekaan doonto farriinta suuq-geynta dijitaalka ah. Iyada oo dhammaan 'emaylku dhintay' hadalka keligaa keli kuma ahaan kartid inaad ka fikirto emaylka in lagu laabi doono kanaallo kale.